Antariksh no anarana isaloran'ny tarika ary ny gadon-kira rock mavesatra no tena manavanana azy. Zava-dehibe ny fahatongavan'ity tarika ity eto Madagasikara, hoy ny Masoivohon'i Inde miasa sy monina eto amintsika raha nanokatra ny fampisehoana. Endrika iray ahazoana mampandroso ny sehatry ny fizahantany mantsy, hoy izy, ny fandalovan'ny mpanakanto malaza amina firenena iray. Tonga nanatrika ity fampisehoana ity rahateo ny minisitry ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr'andro. Nanamafy ihany koa ny ambasadaoron'i Inde fa efa asa natao ny fampahafantarana ny kolontsaina Indiana ary isaky ny faran'ny herinandro dia misy foana ny hetsika atao.